Kukhalwa ngobugebengu KwaZayeka | News24
Kukhalwa ngobugebengu KwaZayeka
UHLELI lubhojozi umphakathi waKwaZayeka eSweetwaters kulandela izigameko zakamuva zokutholakala kwabantu bebulewe.
Umuntu wokugcina otholakale kule ndawo ngoLwesihlanu olwedlule mhla zili-11 kuMasingana (January). Lona wesilisa ongaziwa ukuthi owalaphi watholwa enezingozi kweminye yemihosha yakule ndawo.
Ngokuthola kwe-Echo ngomthombo yawo ekuyona le ndawo, lo mkhuba omubi kuthiwa uqale ukwenzeka ngonyaka owedlule.
Kuthiwa abantu abatholakala sebebulewe kusuke kungasibona abasendaweni nokuyikona okukhathaza kakhulu umphakathi.
Ngaphandle kwenkinga yokutholakala kwabantu sebebulewe, umphakathi wakule ndawo ukhala nangobugebengu obudlangile kanye nezimoto ezizulazulayo nokuthiwa zihlukumeza umphakathi.
Kumanje kukhona owesifazane obeqashile kule ndawo osekuphele isikhathi esingaphezu kwenyanga elahlekile kanti kuze kube yimanje akakatholakali.
UNks Thembelihle Zandile Mttethwa (31) ongowukudabuka eMpangeni kuthiwa wagcina ukubonakala mhla zili-14 kuZibandlela (December) ngonyaka owedlule kanti kuze kube yimanje akakatholakali.
Ngokusho komunye umuntu okade ehlala naye kodwa ongathandanga ukuba adalulwe igama, uthe uNks Mthethwa wahamba ekhaya ekuseni eya esibhedlela esiseHilton nokuyilapho kade esebenza khona njengonogada. Uthe wabuya ntambama ethengile izimpahla zasendlini wabe esebiza ingane yakhe ukuba iyomhlangabeza ukuze izozithatha esitobhini yena wabe esehamba eyohlala nabangani bakhe.
“Saze salala engabuyanga ngalolo suku kodwa sanganaka ngoba vele ubenakho ukuthi abuye ebusuku kakhulu okanye ngakusasa uma ngabe ekade ezijabulisa nabangane bakhe. Kwadlula izinsuku engafiki sazitshela ukuthi hhayi mhlawumbe uhambile waya kubaba wengane yakhe. Uvalo laqale ukusishaya ngoba sesizwa ukuthi akafiki nasemsebenzini akaziwa ulaphi kanti nefoni yakhe futhi ibingasangeni.
“Sabikela amaphoyisa ngalolu daba kodwa kuze kube yimanje akukho okutheni esikutholayo. Sikhathazekile ngempela ikakhulukazi njengoba kunalezi zigameko ezenzekayo la endaweni. Sicela noma ubani ongamfanisa noma yikuphi ukuthi athintane namaphoyisa aseduzane,” kubeka yena.
Elinye ilunga lomphakathi eliqavile kule ndawo, uMnuz Ntokozo Ntsikitha, uthe bakhathazekile bengumphakathi ngendlela izinto ezenzeka ngayo ngoba sekunzima nokuthi bahambe ebusuku.
“Kumanje sihlalele ovalweni ukuthi ngabe ilaphi le ntombazane. Kungabe lapho ikhona isaphila yini? Kwathina singamalunga omphakathi sihleli lubhojozi manje ngoba asazi ukuthi kuzokwenzakalani okulandelayo. Uma nje kuke kwaba mnyama kumele wenze isiqiniseko sokuthi ususekhaya ukhiye iminyango ukuze nawe ungagcini usuzithola uyisisulu sobugebengu lobu obuqhubeka kule ndawo. Sifuna ukuthi kube khona into eyenzekayo ngalokhu ukuze buzophela nya ubugebengu nabantu baphile ngokuthula,” kubeka yena.
Ikhansela lakule ndawo uMnuz Sbusiso Mtshali uvumile ukuthi budlangile ubugebengu kule ndawo kodwa wabe esenxusa umphakathi ukuba ungathuki kakhulu ngoba lokho kuzonikeza izigebegu ithuba lokuthi ziqhubeke zigile imikhuba.
“Zikhona kona izigameko ezingekho zinhle esezike zenzeka khona lapha endaweni njengalesi sidumbu esisanda kutholakala kanjalo nalona wesifazane olahlekile. Kulolu daba lowesifazane amaphoyisa amatasa afuna umkhondo wokuthi atholakale,” esho.
“Kumele sibambisane singumphakathi kanye nezinhlaka ezahlukene.”